3 Nzira dzeKushandisa Tsvagiridzo Yekunatsiridza Musika Ongororo | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 13, 2012 Svondo, October 4, 2015 Hanna Johnson
Mikana ndeyekuti kana iwe uri kuverenga Martech Zone, iwe unotoziva kukosha kwekuitisa kutsvagisa kwemusika kune chero zano rebhizinesi. Kuno kuno ku SurveyMonkey, isu tinotenda kuti kunyatso ruzivo pakuita sarudzo ndicho chinhu chakanakisa chaungaitira bhizinesi rako (uye nehupenyu hwako, zvakare!).
Ongororo dzepamhepo inzira huru yekutsvagisa musika nekukurumidza, nyore, uye nemutengo zvinobudirira. Hedzino nhatu nzira dzaunokwanisa kuita nadzo mune rako bhizinesi zano nhasi:
1. Tsanangura Musika Wako
Zviri pachena kuti chinonyanya kukosha pakutsvaga kwemusika ndiko kutsanangura musika. Iwe unogona kuziva yako indasitiri uye chigadzirwa pasi kune sainzi, asi izvo zvinongokuwana iwe kusvika ikozvino. Vachena, vasina kuroora varume vari mumakore avo makumi matatu vari kutenga sipo yako, kana vasikana vechidiki ndivo vatengi vako vakuru? Mhinduro kumubvunzo iwoyo ichave nekukanganisa kwakanyanya pane yako bhizinesi zano, saka iwe unoda kuve nechokwadi kuti unovimba mairi.
Tumira ongororo yehuwandu hwehuwandu kune vatengi vako, vatengi, kana fan base. Shandisa template yakasikwa nehunyanzvi, kana gadzira yako wega. Vabvunze nezvezera ravo, murume kana mukadzi, rudzi, dzidzo, uye zvavanofarira. Bvunza kuti vanoshandisa sei chigadzirwa chako kana sevhisi, uye bvunza mhinduro yavo. Kunyanya iwe kuziva nezvekuti ivo ndivanaani uye mashandisiro avari kushandisa chigadzirwa chako, zvirinani kuti iwe ugokwanisa kuvapa zvavanoda uye nekuvachengeta vachidzoka kuti vawane zvimwe.
2. Concept Bvunzo
Runha a pfungwa bvunzo kuongorora mhinduro yevatengi kune chigadzirwa, brand, kana zano, risati raunzwa kumusika. Ichapa inokurumidza uye yakapusa nzira yekuvandudza chigadzirwa chako, kuona zvingangodaro matambudziko kana zvikanganiso, uye uve nechokwadi chekuti mufananidzo wako kana brand yakanangwa zvakaringana.
Isa pikicha yemazano ako eako logo, graphic, kana kushambadzira muongororo yepamhepo uye ita kuti vateereri vako vasarudze yavanoda zvakanyanya. Vabvunze izvo zvakavamiririra, icho chifananidzo chakaita kuti vafunge uye vanzwe.
Ko kana icho chinhu chaunoda mhinduro pachiri chisiri mufananidzo kana logo, asi pfungwa? Nyora chirevo chipfupi chevapindura kuti vaverenge. Wobva wavabvunza zvavakarangarira, zvavakaita, matambudziko avanogona kutarisira. Vanhu vakasiyana vanozoona matambudziko akasiyana uye mikana mune yako pfungwa, uye yavo mhinduro ichave yakakosha apo iwe uchinyatso gadzira zvirongwa zvako.
Handizive kusvika vateereri vako? Tine mumwe waunogona kutaura naye…
3. Wana Mhinduro
Paunenge uchinge watsanangura yako musika huwandu hwevanhu, kuyedza mazano ako, uye kugadzira chigadzirwa chako, pane rimwe danho rakakosha mukuita. Kukumbira uye kuongorora zvaunofunga yakakosha kana iwe uchida kuenderera kuendesa mhedzisiro. Tsvaga zvawakaita zvakanaka, ndedzipi nyaya dziri kuva nevanhu, uye ndedzipi nzira dzavanoda kuti iwe utore mune ramangwana.
Haufanire kutora ese mazano aunowana kana uchikumbira mhinduro. Asi nekuzvikumbira uye nekuteerera kune zvinotaurwa nevanhu, iwe unenge wakagadzirira zvirinani kuti ubudirire mune ramangwana rekuyedza kuedza. Vatengi vako vanozotenda kuti iwe wakabvunza, uye ivo vanozotenda nekuvandudza iwe kwaunoita zvakanyanya.
Haufanire kugadzirwa nemari kuti uite mukutsvagisa musika zvinobudirira. Iwe unongoda kutora mukana kune anodhura-anoshanda maturusi aunowana kwauri iwe pa internet. At SurveyMonkey isu tiri kugara tichishanda kuvandudza tekinoroji yedu kuti ikubatsire iwe kuita yako yakanaka, uine ruzivo sarudzo. Nekutumira tsvakiridzo kuti usvike kune yako yakatarwa musika, iwe unogona kuve nechokwadi chekuti kuedza kwako kuri kushanda sezvinobvira.
Tags: pfungwa yekuyedzademographicskutsvakurudza misikaonline ongororochigadzirwa mhinduroSurveyMonkeykuongororwa kwekutsvaga kwemusika
Unyanzvi hweVatengi Vanowira Murudo
Kukadzi 13, 2012 na10:53 PM
Tiri kuita ongororo yedu yepagore yebhizinesi diki yesocial media, tichishandisa surveymonkey kekutanga. Ndinoshamiswa zvikuru nemaitire anga ari nyore kugadzira. Asi chii chakanyatsoita fani kubva kwandiri ndivo vakasiyana vaunganidzi. Ini ndinoda kukwanisa kuona kuti ndeapi mapuratifomu ari kutyaira vanopindura zvakanyanya.
Ndinoda kukukoka iwe kuti ugoverane pfungwa dzako. Ttora ongororo izvozvi.
Kukadzi 14, 2012 na2:54 PM
Loraine - Ndinobvumirana newe pane "zviri nyore kuvaka" chirevo. Patakanga tichiita R&D yekutanga yangu yekutanga, takavimba neSurveyMonkey kune dzinenge data rese rinounganidzwa. Ini ndinonzwa kuti chishandiso ichi chinofanirwa kuve chinodiwa kune Vamabhizinesi uye vanotanga!
Kukadzi 15, 2012 na2:09 PM
Ongororo inoramba iri sosi huru yekuunganidza ruzivo rwakanyanya. Zvingave zvakanaka kunzwa pfungwa dzako pamaitiro ekuunganidza mhinduro dzevatengi kubva pasocial media uye kuti izvi zvinozoita sei pane "chinyakare" webhu-survey nzvimbo. Tiri kunanga kune imwe nzvimbo iyo isingachabatsiri?